सामाजिक सञ्जालहरुमा पोष्ट, कमेन्ट आदिको रुपमा रमाइला मिम् (meme) राख्ने चलन बढ्दै गएको छ । सामान्यता व्यंग्य गर्नलाई फोटो माथि रमाइलो 'टेक्स्ट' लेखेर मिम् बनाएर इन्टरनेटमा सेयर गरिन्छ । इन्टरनेटमा सेयर गरिने भएका कारण यसलाई 'इन्टरनेट मिम्' पनि भनिन्छ । अवस्था, प्रसंग अनुसारको फोटो अनि त्यसमाथि व्यंग्यात्मक वाणी कसलाई पो मन नपर्ला र?
अरुको इन्टरनेट मिम् देखेर, कहिलेकाँही आफूलाई पनि मिम् बनाउन मनलाग्छ, तर मिम् बनाउन लाग्ने समय, सफ्टवेयर आदि सम्झेरै आँट आउन्न । त्यसो त कहिलेकाँही इन्टरनेटकै विभिन्न साइट चहारेर पनि मिम् नबनाएको भने होइन, अनि प्लेस्टोरमै पनि सयौँ मिम् बनाउने एप्स छन् । पछिल्लो समयमा भने फसम् एप्सले निर्माण गरेको "इन्स्टामिम्" चलाउनथालेको छु ।
एक हजार भन्दा धेरै फोटो रहेको दावी गरिएको 'इन्स्टामिम्' मा आफ्नै फोटो पनि प्रयोग गर्ने सक्ने सुविधा रहेकोछ । एपमा गएर त्यहीँ भएको फोटो छानेर वा आफ्नै फोटो अपलोड गरेर, त्यसमाथि लेख्न सकिन्छ । फोटोमाथि लेखिएको शब्दलाई सानो ठूलो बनाउने देखि लिएर रंग पनि परिवर्तन गर्न सकिने सुविधा छ । फोटोमाथि लेखिएका अक्षर/शब्दलाई तलमाथि दायाँ वायाँ, आफूलाई मन लागेको ठाउँमा सार्न पनि सकिन्छ । यसरी मिम् बनाइसकेपछि, एपले सेयरिङ अप्सन् देखाउँछ, जहाँबाट सजिलै फेसबुक, ट्विटर लगायत अन्य एप्समा सेयर गर्नसकिन्छ ।
Brace Yourself :D #NepVsNam Meme created using Instameme. Download from http://t.co/T60qo3z8Y6 pic.twitter.com/IMcE4PLqaC
— Binamra (@ibnamra) July 11, 2015
एपमा 'सेभ अप्सन्' देखिन्न तर पनि बनाइएका सबै मिम्‌हरु मोबाइलमा सेभ हुन्छन् । एपको 'न्याभिगेसन्‌को माई क्रिएशन' मा गएर, आफूले बनाएका मिम् हेर्न र सेयर गर्न सकिन्छ । सेभ अप्सन् नदेखिनु अनि सेयर गर्दा "इन्स्टामिम"को लिंक सँधै देखिनुले, नयाँ प्रयोगकर्ताहरुलाई एप प्रयोग गर्न कठिनाइ हुनसक्छ । तर केही पटक प्रयोग गरिसकेपछि भने, हरेक फेसबुक कमेन्ट र ट्विटरको रिप्लाइमा मिम् बनाउँ झैँ लाग्छ, किनकी इन्स्टामिम्‌मा मिम् तुरुन्तै बनाउन सकिन्छ ।
एन्ड्रोइडमा उपलब्ध रहेको इन्स्टामिम् आइओएस् तथा वेबमा छिट्टै आउँदैछ । फसम् एप्स, रेस्टुरेन्ट मोबाइल सर्च कम्पनी एल्लो नेपालको मोबाइल डिभिजन हो । फसम् एप्सका सह-संस्थापक अनिष श्रेष्ठका अनुसार, फसम्‌ले महिनामा एउटा नयाँ ग्लोबल एप बनाउने योजना राखेको छ ।
➤ Install Instameme from Google Play.
Aakar Post is available on Google Play.